एमाले नेपाल–खनाल समूहले तोक्यो प्रदेश र विभागका इन्चार्ज, कसलाई के जिम्मेवारी ?
Homeसमाचारएमाले नेपाल–खनाल समूहले तोक्यो प्रदेश र विभागका इन्चार्ज, कसलाई के जिम्मेवारी ?
March 13, 2021 admin समाचार 4365
नेकपा (एमाले) माधव नेपाल र झ’लनाथ खनाल पक्षले पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज र विभागको जिम्मे’वारी तोकेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपाल–खनाल समूहले पार्टी नेता’लाई प्रदेश र विभागको जिम्मेवारी तो’केको हो ।
नेता भीम रावलका अनु’सार बैठकले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी भीम आचार्यलाई दिएको छ । प्रदेश २ को इन्चार्ज घन’श्याम भुसाल बनेका छन् भने बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्ट’लक्ष्मी शाक्य छन् । शाक्यलाई महिला विभागकोसमेत जिम्मे’वारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदे’शको इन्चार्जको जिम्मेवारी सुरेन्द्र पाण्डेले पाएका छन् भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको जिम्मे’वारी युवराज ज्ञवालीलाई दिइएको छ । सुदूर’पश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी भने भीम रावल स्वयम्ले पाएका छन् । बैठकले रघुजी पन्तलाई युवा इन्चार्ज, गोकर्ण विष्टलाई विद्यार्थी इन्चार्जको जि’म्मेवारी दिइएको छ ।
शुक्रबार मात्र बा’लुवाटारमा बसेको एमाले केपी ओली समूहको बैठकले माओवादी नेतालाई प्रदेशको जिम्मेवारी दि’एपछि नेपाल समूहले शनिबार यस्तो निर्णय गरेको हो । ओलीले शुक्रबार प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मे’वारीसमेत हेरफेर गरेका थिए।
अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटा’एर ओलीले रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बागमती प्रदेश इन्चार्ज बनाएका थिए भने सूदुरपश्चिममा भीम राव’ललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज बना’एका हुन् ।
प्रदेश १ को इन्चार्ज सुवा’स नेम्वाङ, अध्यक्ष देवराज घिमिरे र सचिव विनोद ढकाल बनेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश २ को इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल बनेका छन् भने अध्यक्ष प्रभु शाह ब’नेका छन्। सचिवको जिम्मेवारी सुमन प्याकुरे’ललाई दिइएको छ।
बागमती प्रदे’शको इन्चार्ज रामबहादुर थापा ‘बादल’, अध्यक्ष आनन्द पोखरेल र सचिव खेम लो’हनी बनेका छन्। गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, इन्चार्ज जगत विश्वकर्मा र सचिव भूमी त्रि’पाठी बनेका छन्।
लुम्बि’नी प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेल, अध्यक्ष लीला गिरी र सचिव खेममान खड्का बनेका छन्। क’र्णाली प्रदेशको इन्चार्ज कमलाल कँडेल बनेका छन् भने अध्यक्षको जिम्मेवारी गुलाबजंग शाह र सचिव धर्मराज रेग्मी बने’का छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज ले’खराज भट्ट बन्दा अध्यक्षको कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र’सिंह रावल बनेका छन्। – अननपूर्णपोस्ट् बाट
अहिलेसम्म बच्चा नपाएको भनेर सोध्दा: मन च’सक्क हुने रहेछ – नविना लामा
बिहिबारको दिन भुलेर पनि गर्न हुदैन य’स्ता काम
August 27, 2020 admin समाचार 14209
बिहिबा’रलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्ड’मा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्प’तिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक का’र्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर बिहिबा’र केही काम गर्न भने
April 2, 2021 admin समाचार 4051
नौ महि’नाको सानी छोरी छो डेर आमा घर बाट भा गि न। प्रेम बिबाह गरेर भागेको जोडी २ बर्ष न पुग्दै छु’टिन पुग्यो। आमाको काखमा रमाउने ,काख मै निदाउने छोरीको के गल्ति थियो होला र
April 19, 2021 admin समाचार 3321